နယ်​မ​ရွေး​သောကို​အောင်​ကြီး2— Hive
(ယခုစာပိုဒ်​များတွင်​ ပါဝင်​​သော အချို့အ​ကြောင်းအရာများသည်​ အနည်းငယ်​ ရိုင်းသကဲ့သို့ဖြစ်​​နေ​သော်​လည်း ထိုအဖြစ်​အပျက်​သည်​ တကယ့်​အဖြစ်​အ​ပျက်​ဖြစ်​​သော​ကြောင့်​ သတိချပ်​​စေရန်​ အတတ်​နိုင်​ဆုံး ​ရွေးချယ်​​ရေးသားထားပါသည်​။ အနည်းငယ်​ ရိုင်းသည်​ဟု ထင်​မြင်​ပါက ခွင့်​လွတ်​ပါရန်​ ကြိုတင်​​တောင်း​ပန်​အပ်​ပါသည်​။)
မနက်​မိုးလင်း​သော်​ ဆရာ​တော်​သည်​ ​အောင်​ကြီးအဖြစ်​သနစ်​ စိတ်​ဝင်​စား​တော်​မှု​သော​​ကြောင့်​ အ​ခေါ်လွတ်​​လေသည်​။
​ကောက်​ရိုးသွား​ခေါ်​သော်​ ကို​အောင်​ကြီးသည်​ ထို​ခေတ်​က ဗွီဒီယိုမင်းသမီး
မိုးပြည့်​ပြည့်​​မောင်​ ငိုသကဲ့သို့ ​ခေါင်းအုန်းကြီးဖက်​ကာ ငို​နေဆဲဖစ်​သည်​။
တညလုံးအိပ်​ဟန်​မတူ။ ငိုချည်း ငို​​နေ​လေသည်​။ ​ကောက်​ရိုးမှာ ​ယောက်ျားရင့်​မာကြီးတစ်​​ယောက်​ ​မောက်​ကာ ​ခေါင်းအုံးကိုဖတ်​ကာငို​နေပုံကား မသိရင်​ မဒိန်းကျင့်​ခံရ​သော မင်းသမီးနှင့်​ အ​တော်​တူ​လေသည်​။ သို့​သော်​ ဒါသည်​ ဇတ်​ဝင်​ခန်းမဟုတ်​ ကို​အောင်​ကြီး ကျားစစ်​စစ်​ကြီး။ ကျ​နော်​တို့ရဲ့အားလုံးရဲ့ လီတာကြီး စုံလည်းစုံ​သောကို​အောင်​ကြီး​လေ တရှုံ့ရှုံငို​နေပုံက မထင်​ရက်​စရာ ကျ​နော်​တို့ပဲ မ​နေ့ညက အမှုးမ​ပြေလားထင်​ အိပ်​မက်​လိုလို။
​``​အေးပါ ​ကောက်​ရိုး လာခဲ့မယ်​ ​အေးပါ...ဟီး...ဟီး´´
ကို​အောင်​ကြီး မျက်​ရည်​​တွေသုတ်​ ပီး အ​နွေးထည်​တထပ်​ဝတ်​ထားတာကို ထပ်​ဝတ်​ပီး ​စောင်​ထဲမှ ထလာ​လေသည်​။
​ကောက်​ရိုး​အမြင်​ဖြင့်​ ကွတကွတနိုင်​ကာ မကြာခဏ ကျွတ်​ကျွတ်​​တိုးတိုး​လေးညည်းကာ ထလိုက်​လာ​လေသည်​။
ဆရာ​တော်​​မေးလိုက်​​လေသည်​။ ဆရာ​တော်​​မေးတာနဲ့ ​ဘေးက ကျ​နော်​​တို့ကိုကြည့်​ရင်း
ဟီးအအီးအီးဟီး´´ဟ​ကောင်​ရ ​မေး​နေတာမ​ဖြေပဲ ဘာလို့ငို​နေရတာလဲ။ ညက ဘာမဟုတ်​တာ​တွေလုပ်​လာလို့ ဖင်​တုံးလုံးပြန်​လာရသလားဟ ​ပြောစမ်း´´
ဆရာ​တော်​မာန်​လည်းမာန်​ ​မေးလည်း​မေးပြန်​သည်​။ ဆရာ​တော်​​ဒေါသထွက်​ရင်​ မလွယ်​။ အခုထိ အ​ဖေ​တောင်​ပြာ​နေ​အောင်​​ကြောက်​သည်​။ ကို​အောင်​ကြီး ဘာခံနိုင်​ရိုးလား။
ကျ​နော်​တို့လည်းစိတ်​ဝင်​စားစွာနား​ထောင်​​နေမိတယ်​ ကို​အောင်​ကြီးဘာဖြစ်​လာသလဲ​ပေါ့​လေ။ ကို​အောင်​ကြီးခမျှာမှာ​တော့ ကျ​နော်​တို့ကိုတလှည့်​ ဆရာ​တော်​ကိုတလှည့်​ မျက်​နာငယ်​​လေးနဲ့ကြည့်​ရင်း သက်​ပြင်းချကာ ​လျောက်​​တော့သည်​။
မ​နေ့ညက တပည့်​​တော်​ ​ကောက်​ရိုးတို့ မ​ဟော်​တို့ကို ထားခဲ့ပီး ​ဂျော်​တကီး​တွေနဲ့ အပြင်​ထွက်​ခဲ့မိပါတယ်​ဘုရား။´´
``​ဟ​ကောင်​ ​အောင်​ကြီး ဘာတုန်း ​ဂျော်​တကီးက´´
``အ​ခြောက်​ပါဘုရား အ​ခြောက်​​တွေပါ။ တပြည့်​​တော်​ ပွဲသွားရင်း အ​ခြောက်​အုပ်​စုနဲ့​တွေ့​တော့ ဟို​ပြောဒီ​ပြောနဲ့ သူတို့အုပ်​စုနဲ့ ​ရောခဲ့မိတယ်​ဘုရား။´´
``အ​ခြောက်​ဆိုအ​ခြောက်​​ပေါ့ကွာ ဘယ့်​နှယ်​​ဂျော်​တကီး ထား​တော့ဆက်​​ပြော မင်း ဘာဖြစ်​တာ။´´
``တင်​ပါ့၊ တပည့်​​တော်​ သူတို့နဲ့က​နေရင်း အပြင်​သွား​သောက်​မယ်​ဆိုလို့ ​ကောက်​ရိုးတို့ကို စိတ်​မပှု​နဲ့​ပြောပြီး show အပြင်​ထွက်​လာမိပါတယ်​။
သူတို့ကတိုက်​မယ်​ဆိုပီး တပည့်​​တော်​ကိုဝယ်​တိုက်​ကြတာ တပည့်​​တော်​လည်း မှုး​နေတာနဲ့ တိုက်​သမျှထပ်​​သောက်​​တော့တာပဲဘုရား။´´
``​နောက်​​တော့ တပည့်​​တော်ဘာမှမမှတ်​မိ​တော့ပါဘူး။ တပည့်​​တော်​ချမ်းလို့ နိုးလာ​တော့ မြက်​ခင်း​ပေါ် တကိုယ်​လုံး တုံးလုံးကျွတ်​နဲ့ပါပဲဘုရား။ ဘယ်​သူ့မှမ​တွေ့​တော့ပါဘူး။ ​ကန်​​တော့ပါဘုရား စအိုဝက မခံရပ်​​အောင်​နာ​နေပီး လက်​နဲ့စမ်းကြည့်​​တော့ ချွဲကျိကျိအရည်​​တွေပဲ​​တွေ့တယ်​ဘုရား။
ဒါနဲ့ ​ဘေးက ခြုံ​ပေါ်မှာ​အောက်​ခံ​ဘောင်းဘီ​လေး​တွေ့​တော့ ​ကောက်​ဝတ်​ပီး ​ကျောင်းကို​ပြေးလာတာပါပဲဘုရာ။ အီး..ဟီးဟီး...။´´
ကျ​နော်​တို့ လီတာ စုံလည်းစုံ နယ်​မ​ရွေး​သော ကို​အောင်​ကြီး​ပြောလဲ​ပြော ငိုလည်းငိုပြန်​သည်​။
​ခေတ်​အမြင်​ရှိ​သော ဆရာ​တော်​ ဂန်းနားပီယ မှ အဖြစ်​သနစ်​ကိုနား​ထောင်​ပီး ​ခေါင်းတဆက်​ဆက်​ငြိမ့်​ကာ
`` အင်း ကိုယ့်​အလှည့်​ကျ မနွဲ့စတမ်း​ပေါ့ကွယ်​။ မှုး​မှောက်​​နေလို့သာ သက်​သာတယ်​။ နိုး​နေလို့က​တော့ ကြက်​သီး တဖျန်းဖျန်းထသွားမှာပဲ​မောင်​​ရေ။ အသက်​ကိုရန်​မရှာကြတာကံ​ကောင်း​ပေါ့ကွယ်​။ ဒါထက်​ ​အောင်​ကြီး ​ဆေးခန်းသွားမလား ဘယ်​နှစ်​​ယောက်​​လောက်​ရှိလဲကွ အ​ခြောက်​​တွေက။´´
​``​မသွား​တော့ပါဘူးဘုရား။ တပြည်​​တော်​ နာ​ပေမယ့်​မပြရဲဘူးဘုရား။ ဟိုကလည်းထပ်​​မေးရင်​ တပြည့်​​တော်​မ​ဖြေရဲဘူး။ အ​ခြောက်​အုပ်​စုက ဆယ်​​ရောက်​​လောက်​ရှိတယ်​ဘုရား´´
ဆရာ​တော်​ ပြုံးကာ ​အား​ပေး​လေသည်​
``​အေးကွယ်​ ကိုယ့်​ဝဋ်​​ကြွေးပါလာတယ်​လို့မှတ်​​ပေါ့ကွယ်​။ ဦးဇင်းစာဖတ်​ပီးသိသ​လောက်​​တော့ ဆယ်​​ယောက်​​လောက်​ဆိုလဲ အကုန်​မဟုတ်​တန်​ရာဖြစ်​မှာပါ။ လွန်​​ရောကျွန်​​ရော ကိုး​ယောက်​​ပေါ့ကွာ ကိုယ့်​အလှည့်​ကျ ​ယောက်ျားပီပီ အံကျိတ်​ခံ​ပေါ့ကွာ။ ဟားဟားဟား´´
ဆရာ​တော်​​ချော့ခါမှ ကို​အောင်​ကြီးလည်း ဗြဲ ဗြဲနဲ့ ငို​တော့တာပဲဗျာ။ ပြီး​ပြော​သေးတယ်​
``အရှင်​ဘုရား ​ယောက်ျားရင့်​မာကြီးကျမှ အုပ်​စုလိုက်​ မုဒိန်းကျင့်​ခံရတာမို့ ငိုတာ​ပေါ့ဘုရား ဟီး အီးအီး´´
​ပြောပီ​ကော ကျ​နော့လီတာ ဆရာကြီးကို​အောင့ဖြင့်​ အ​တော်​ အ​တွေ့အကြုံစုံပါတယ်​ဆို​နေမှ။
ခင်​ဗျား​ကော သူ့​နေရာကခံစားကြည့်​ ကြက်​သီးဖျန်းဖျန်းထသွားမယ်​မို့လား။ တကျပ်​​ကြေး​လောင်းထားပါတယ်​ဆို။
``ဟုတ်​ကို​အောင်​ ကျ​နော်​​ရောက်​​တော့မယ်​ ok´´
လေကြီးလေကျယ်တွေ သင်ခန်းစာယူစရာပေါ့ဗျာ။အပိုင်းဆက် မျှော်လျက်
ဟုတ်​ပ ကိုယ်​ချင်းစာကြည့်​ပါကိုမ​ဟော်​ရယ်​ ​နော့​လေ
စာရေးသူ အတွေ့ အကြုံ များ ဖြစ်နေမည်လား?
Hello @thatkozaw! This isafriendly reminder that you have 3000 Partiko Points unclaimed in your Partiko account!